गाला हेरेरै थाहा हुन्छ महिलाको स्वभाव, कोठी र डिम्पलले दिन्छ यस्तो संकेत – Krazy NepaL
April 17, 2021 715
देब्रे गाला सानो भएकी महिलाको मृत्यु पतिभन्दा अघि हुन्छ । यस्ता स्त्री एकदमै शालीन र मिलनसार हुन्छन् ।
हाँस्दाखेरी गाला फुल्ने महिला मेहनती हुन्छन् । पचास वर्ष कटेपछि यिनीहरूले सुखप्राप्ति गर्छन् ।
Prevसपनामा मन्दिर गएको देखेमा के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्
Next१८ महिनापछि राहुले ग्रहचक्रमा गर्यो ठूलो परिवर्तन, यी राशिको शुरु भयो शुभ समय !
आर्थिक संकटले सताएको छ ? रामनवमीका दिन यसो गरौं
बिहेपछि महिलाहरुको हिप र स्तन किन बढ्छ ?